Maninona no Tsy Mety Foana ny Zavatra Teneniko? | Manontany ny Tanora
HAMAKY AMIN'NY TENY Afrikaans Albaney Alemà Amharique Anglisy Arabo Arabo (Liban) Armenianina Azerbaijaney Bichlamar Bicol Boligara Catalan Cebuano Chichewa Chitonga Chitumbuka Cinghalais Danoà Efik Espaniola Estonianina Failandey Fidjianina Fon Frantsay Féroïen Ga Galoà Goujrati Goun Grika Géorgien Hebreo Hiligaynon Hindi Hindi (Romanina) Holandey Hongroà Iban Ibo Icibemba Iloko Indonezianina Iokrenianina Islandey Isoko Italianina Japoney Kabuverdianu Kamba Kannada Kantôney Nentim-paharazana Kikaonde Kikuyu Kiluba Kinyarwanda Kirghiz Koreanina Kreôla any Haïti Kreôla any Seychelles Kroaty Kurde Kurmanji (Caucase) Kurde Kurmanji (Sirilika) Kwanyama Letonianina Lingala Litoanianina Malagasy Malayalam Malezianina Maltais Mam Mambwe-Lungu Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Masedonianina Maya Mongol Mooré Myama Ndebele (Zimbabwe) Norvezianina Nzema Népali Oromo Ossète Ourdou Ouzbek Ouzbek (Romanina) Pangasinan Papiamento (Curaçao) Pendjabi Pendjabi (Romanina) Persianina Pidgin (Afrika Andrefana) Pidgin any Amin'ny Nosy Salomon Poloney Portogey (Brezila) Portogey (Portogaly) Quichua (Imbabura) Rarotonga Romanianina Rosianina Samoanina Sango Sepedi Serba (Sirilika) Serba (Soratra Romanina) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Sinoa Kantôney Notsorina Slovaky Slovenianina Soedoà Soundanais Swahili Tagalog Tailandey Tamoul Tarasque Tatar Tenin’ny Tanana Amerikanina Tenin’ny Tanana Brezilianina Tenin’ny Tanana Meksikanina Tetun Dili Tigrigna Tiorka Tiv Tojolabal Tseky Tsonga Twi Tzotzil Télougou Urhobo Vietnamianina Waray-Waray Xhosa Yorobà Zoloa Éwé
“Misy fotoana aho mba mahatandrina ny zavatra lazaiko, fa indraindray hoatran’ny hoe mandeha ho azy izany fotsiny ilay izy!”—James.
“Tsy mieritreritra ny zavatra hoteneniko aho rehefa miasa saina. Be resaka loatra indray anefa aho rehefa falifaly. Hoatran’ny hoe tsy mety foana ny zavatra teneniko e!”—Marie.
Milaza ny Baiboly hoe toy ny afo ny lela. “Kely fotsiny dia efa mampirehitra ala be.” (Jakoba 3:5, 6) Matetika ve ianao no mahita olana noho ny zavatra lazainao? Hanampy anao ity lahatsoratra ity raha izany.
Fa maninona no tsy mety foana ny zavatra teneniko?
Inona no hanampy ahy hitandrina ny zavatra teneniko?
Tsy lavorary. Hoy ny Baiboly: “Manao fahadisoana imbetsaka ... isika rehetra. Raha misy tsy manao fahadisoana amin’izay lazainy, dia izy no olona lavorary.” (Jakoba 3:2) Tsy lavorary isika ka tsy voafehintsika indraindray ny zavatra lazaintsika.
“Mandainga aho raha miteny hoe voafehiko tsara ny zavatra eritreretiko sy lazaiko, satria izaho aza tsy lavorary.”—Anna.
Be resaka loatra. Hoy ny Baiboly: “Ny teny maro tsy ilaozan’ota.” (Ohabolana 10:19) Mety hiteny zavatra mampahatezitra ny hafa ianao, raha be resaka loatra fa zara raha mihaino.
“Tsy hoe rehefa be resaka ianao, dia ianao izany no tena mahay. I Jesosy no olona nahay indrindra teto an-tany, nefa nisy fotoana izy nangina.”—Julia.
Manao vazivazy tafahoatra. Hoy ny Baiboly: “Misy manao teny tsy voahevitra, ka tonga toy ny fanindron’ny sabatra.” (Ohabolana 12:18) Anisan’ny teny tsy voahevitra ny vazivazy sasany. Manambany ny hafa mantsy ilay izy, dia lasa mampalahelo azy. Mety hiteny ilay olona mivazivazy hoe: “Mihanihany fotsiny aho an!” Kanefa raha zavatra manambany sy mampalahelo ny hafa ve dia tokony hampihomehy? Milaza ny Baiboly hoe tsy tokony ‘hanevateva sy hanaratsy’ olona mihitsy isika.—Efesianina 4:31.
“Izaho tia mananihany sy mampihomehy olona. Lasa tafahoatra anefa ilay izy matetika, dia mahita olana foana aho.”—Oksana.
Tsy azo averina intsony ny zavatra efa notenenina, hoatran’ny paomady tsy azo averina ao anaty tranony
Mety ho sarotra aminao ny mitandrina an’izay lazainao. Afaka manampy anao anefa ny toro lalan’ny Baiboly. Diniho, ohatra, ireto:
“Tazòny ao am-ponareo ihany ny teninareo ... Ary aoka hangina ianareo.”—Salamo 4:4.
Aleo tsy mamaly rehefa tezitra. Hoy i Laura: “Tena te hamoaka an’izay any am-poko aho, rehefa ilay tezitra be iny.” Hoy ihany izy: “Miezaka ny ho tony foana anefa aho. Faly aho avy eo satria tsy nilaza zavatra nety ho nanenenako.” Na miezaka ny ho tony segondra vitsy fotsiny aza ianao, dia efa manampy anao tsy hiteniteny foana izany.
“Ny fon’ny marina mieritreritra vao mamaly.”—Ohabolana 15:28.
Tsy hahita olana ianao raha mieritreritra tsara aloha vao miteny. Azonao atao ny misaintsaina hoe:
Marina ve ilay zavatra tiako hotenenina? Tsara fanahy ve aho raha miteny an’ilay izy? Ilaina ve ny miteny an’ilay izy?—Romanina 14:19.
Ho faly ve aho raha misy olona miteny zavatra hoatr’izany amiko?—Matio 7:12.
Sao dia tsy miraharaha ny heviny aho raha miteny an’ilay izy?—Romanina 12:10.
Sao dia tsy izao aho no tokony hiteny an’ilay izy?—Mpitoriteny 3:7.
“Amim-panetren-tena kosa dia aoka samy hanao ny hafa ho ambony noho ny tenany.”—Filipianina 2:3.
Tsy hieritreritra zavatra ratsy momba ny hafa ianao raha manaraka an’io torohevitra io. Hanampy anao hitandrina an’izay lazainao izany, ka hieritreritra tsara ianao vao hamaly. Mety hahateny zavatra mampalahelo olona ihany anefa ianao indraindray. Miezaha hanetry tena raha izany, ka mialà tsiny haingana. (Matio 5:23, 24) Mitandrema tsara amin’ny manaraka!
“Lasalasa foana ny vavako rehefa ilay mafana tsara iny ny resaka. Raha mieritreritra kely segondra vitsy fotsiny anefa aho, dia mahavita mitandrina kokoa ny zavatra lazaiko. Mila mandinika, ohatra, aho hoe inona no mety ho vokatr’ilay izy, na hoe mahasoa ny hafa ve ilay izy.”—Taylor.
“Mila mandinika ny zava-misy ianao, rehefa misy olona miteny zavatra mahasosotra anao. Teny tsy voahevitra ilay izy matetika, dia azonao hadinoina fotsiny. Indraindray anefa hoatran’ny hoe tsy rariny mihitsy ny zavatra tenenin’ilay olona, fa mety hisy azo raisina ihany. Mila miresaka tsara aminy fotsiny ianao rehefa hoatr’izany.”—Brandon.
“Aza tonga dia tenenina izay zavatra tonga ao an-tsainao voalohany. Mety hoe ny fomba fijerinao ny zava-misy na ny fomba fijerinao an’ilay olona no mila ovana. Tsy dia atahorana hilaza zavatra hampalahelo azy ianao amin’izay.”—Jessica.
Mieritreritra ve ianao indraindray hoe tsy ianao irery no diso? Nahoana anefa ianao no tokony hiala tsiny na izany aza? Hahita antony telo ianao ato.
Tokony ho fantatrao fa tsy maintsy misy foana ny olana rehefa mifandray amin’olona. Inona àry no azonao atao rehefa miteny na manao zavatra mampalahelo anao ny namanao?
Hizara Hizara Fa Maninona àry no Tsy Mety Foana ny Zavatra Teneniko?
ijwyp no. 84